Adeegga macluumaadka: Österreichischer Integrationsfonds ÖIF
Adeega warbixinta luuqadaha badan
Ma ugu baahantahay warbixin luuqad ajaanib ah?
Haddii aadan weli ugu hadlin si ku fillan af Jarmalka, xubnaha shaqaalaha Austrian Integration Fund ayaa kugu caawin karo ma ahan kaliya qof ahaan laakin sidoo kale taleefon ahaan, oo kugu siiyo warbixin mowduucyo kala duwan. Si fudud u buuxi meelaha hoose. Waxaa dib kuugu soo wacayo luuqadaada aad dooratay xubin shaqaalaha.
* Goobaha loo baahanyahay
Waxaan u baahannahay warbixinta xigto:
Waxaan halkaan si cad ugu ogolaanayaa Austrian Integration Fund inay ka baarandagaan xogta aan aniga bixiyay oo ujeedada lagu sameynayo dib u soo wacid. Waan ka laaban karaa ogolaanshahaan xili walba iyo aniga oo sababo sheegin oo warqad u soo qorayo Austrian Integration Fund, 1030 Vienna, Schlachthausgasse 30, oo i-meel u soo dirayo datenschutz@integrationsfonds.at, ama la hadlayo xubinta shaqaalaha ee Austrian Integration Fund. Austrian Integration Fund waxay joojineysaa dhammaan ka baaran daga dheeraadka ah ee xogtaada sida ugu dhaqsiha badan ee hay'ada ay helaan ka laabashada.
Waan aqriyay oo waan ogolaaday xeerka hore.